အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံ - ဆယ်လူလာယန္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းအကျိုးဆက်များ (၂၀၀၆) - Your Brain On Porn
ဦးနှောက် Res ။ 2006 ဒီဇင်ဘာ 18; 1126 (1): 56-65 ။ EPub 2006 စက်တင်ဘာ 15 ။
703, USA တွင်စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံဌာန, Purdue တက္ကသိုလ်, 47907 တတိယလမ်း, အနောက် Lafayette ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurobiology အကြီးအကျယ်အာရုံကြောဆဲလ်တွေပေါ်ဟော်မုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်နှင့်မည်သို့သောဤသက်ရောက်မှု copulatory မော်တာပုံစံများပြသမှုသို့ဘာသာပြန်ဆို။ တန်းတူအရေးပါမှုသျောလျော့နည်းလေ့လာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနှင့်မည်သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ copulatory ထိရောက်မှုပွောငျးလဲ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏အကျိုးဆက်များ, တချို့ရှိနေပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သုတ်ရည်ထိအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်။ N ကိုဤအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ eural ဆက်စပ်မှု dopamine ဂီယာအတွက်ရေရှည်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများနှင့်အာရုံခံ plasticity (ဥပမာ dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေး) နှင့်ဆက်စပ်သော postsynaptic အချက်ပြလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများမျိုးဆက်ပွားအောင်မြင်မှုတိုးမြှင့်နိုင်မယ့်လမ်းအတွက်တိုးပွားလာ copulatory ထိရောက်မှု၏တော့သည်ရလဒ်ကိုရှိပါတယ်ရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
keywords: သုတ်ရည်ထိ, သတိထား, dopamine, နျူကလိယ accumbens, အချက်ပြ, plasticity
"အဘယ်ကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များမိတ်သလဲ?" အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurobiology ၏စိတ်နှလုံးမှာတည်ရှိသည်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းများကိုမြှင့်ခြင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် neurobiological အဖြေတွေကိုရှိသည်သောအပြုအမူများနှင့်နီးခြင်းနှင့် distal အကြောင်းရင်းများနှင့်အကျိုးဆက်များကိုနှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမအပြုအမူမေးခွန်းရိုးရှင်းတဲ့အဖြေရှိပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းမေးခွန်းကိုအသုံးအများဆုံးအဖြေ "အမျိုးအနွယ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်" ဖြစ်ပါတယ်။ [ဒီအပြုအမူတစ်ခု distal အကျိုးဆက်များ၏အခြေအနေတွင်အဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်, ထိုနည်းတူဤကဲ့သို့သောအဖြေတစ်ခုခြောမမှန်ကန်2] ။ Agmo  လိင်ကွဲသုတ်ရည်ထိကလေးများထုတ်လုပ်ရန် (ယူဆရ) ၏ခန့်သာ 0.1% ကိုညွှန်းဆွီဒင်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ဒေတာများကိုးကား။ တောင်မှဤကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်ဖက်၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းအမျိုးအနွယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ရသောကြွက်အဖြစ်မျိုးစိတ်တို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်မှုကိုယ်ဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဆိုလိုပါဘူး မျှော်လင့်ထားသည့် သုတ်ရည်ထိအကျိုးဆက်။
တိရိစ္ဆာန်များမိတ်အဘယ်ကြောင့်များမေးခွန်းတစ်ခုမှာအဖြေကိုတစ်မျိုးပွားမှုအရည်အချင်းအထီးကနေလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်နေတဲ့ပွောငျးလဲနေသောမျိုးဆက်ပွားဇီဝြဖစ်စဉ်တစ်ခု '' reflex '' တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ထိုကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ [အမျိုးသမီးတစ်ဦး mounting အထီးမှလိင်တုံ့ပြန်ရန်အဘို့အသားအိမ်ဟော်မုန်းထိတွေ့တဲ့ sequence ကိုတစ်ဦးလိုအပ်ချက်ဇီဝကမ္မအခွအေနေဖွဲ့စည်းခဲ့သောလေ့လာရေးအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်70] ။ ကြွက်အဘို့, estradiol ထိတွေ့မှု၏ရက်ပေါင်းများစွာ [သဘာဝကျကျစက်ဘီးအမျိုးသမီးအတွက်မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ကိုသြဒိနိတ်ကြောင်းအဓိကချို့ယွင်းတစ်ဦးထက်ပိုသောယာယီမြင့်တက်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်22] ။ လူအများကယုတ္တိဗေဒ [estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်းမှုအတွက် receptors င်ဦးနှောက်ဒေသများဖော်ထုတ်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအသေးစိတ်များအတွက် focal မှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ခဲ့သည်70] ။ ထို့ပြင်အာရုံကြောဆဲလ်တွေပေါ်ဤအကြောင်း Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းများ၏လုပ်ရပ်များ [အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဖြန်ဖြေဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်ပူဇော်မည်ဖြစ်ကြောင်း71] ။ [6,71 ဥပမာ] ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏လေ့လာမှုကဒီအစီအစဉ်ချဉ်းကပ်မှုမြင့်မားအောင်မြင်သောဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသံသယဖြစ်ပြီး, circuitry, neurochemistry နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤ neurobiology များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကောင်းစွာထူထောင်လျက်ရှိသည်။
သို့တိုင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ချက်ချင်းရေရှည်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ neurobiology ထိန်းညှိအခြားရှုထောင့်, ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဤစနစ်၏အခြေခံအာရုံကြော plasticity အပေါ်အတွေ့အကြုံသက်ရောက်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုရှိသေး၏။ ဤသည် neurobiology [အထီး, အဓိကအားအထီးကြွက်များအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်2] ။ ဒီတင်ပြချက်၏ရည်မှန်းချက်အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်, အမျိုးသမီးထိုသို့သောပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းကနေ, ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ distal အကျိုးဆက်များမျိုးပွားဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါစဉ်အခါ, Proximity ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တကယ်တော့ထဲမှာ, အပြုအမူမောင်းရသောစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ, activate လုပ်ဖို့ကြောင်းသိသာသည်။
2 ။ အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများအပေါ်အတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ
လူမှုရေးဂေဟဗေဒလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်သို့anice ဆနျ့ကငျြဘပူဇော်နှစ်ခုမျိုးစိတ်နော်ဝေကြွက်များနှင့်ဆီးရီးယားဟမ်းစတားဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ် Burrow စနစ်များတွင်နေထိုင်ကြသည်။ သူတို့အား Burrow အတွင်းမှာပဲကြွက် [ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း၏မျိုးစုံသားစဉ်မြေးဆက်ပါဝင်သည်ဟုရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအဆောက်အဦများ3], (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံး) အရွယ်ရောက်ပြီးသူဟမ်းစတားတစ်ဦးချင်းစီ Burrow အတွက်သီးခြားစီအသက်ရှင်နေထိုင်သော်လည်း .
ကြွက်များ၏လူမှုရေးစနစ်က [တစ်ပြိုင်နက်အဖော်ရှာမျိုးစုံယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဖို့သူ့ဟာသူချေးငှားသည်51] ။ ဒီပုံဖရိုဖရဲအစီအစဉ်ရှိနေသော်လည်းအမျိုးသမီးကြွက် [အထီးဒီမျိုးစုံအထီးမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းတစ်သုတ်ရည်လွှတ်အထောက်အကူပြုမည်သည့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်တဦးချင်းယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ပုံစံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြသည်51] ။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးကြွက်မိတ်လိုက်များတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သူများဖြစ်ကြပြီးအိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရေးအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ပုံစံကိုထိန်းချုပ်၏ထိရောက်သောနည်းလမ်းများသည်။
ကြွက်များတွင်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏တောင်းနိုင်အောင်အစိတ်အပိုင်းအမျိုးသမီးအမျိုးသားများနှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အတွက်လမ်း၏အရှင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ အထီးကြွက်တစ်ဦး estrous အမျိုးသမီးချဉ်းကပ်သောအခါ, အမျိုးသမီးဝေးအထီးကနေသူမ (ဆိုလိုသည်မှာဖွယ်ရှိနေသည်) အရပျ၌ခုန်သို့မဟုတ် (ပျံတတ်သောမီး, ဆိုလိုသည်မှာ) မိမိကိုယ်ကိုကျု့ံမည့်ခိုင်မာသော-အတော်များများကမျက်စိ locomotor ပုံစံတွေနဲ့တုံ့ပြန်မည် [20,49] ။ သူမတစ်ဦး copulatory အဆက်အသွယ်ရပ်နှင့်ခွင့်ပြုချိန်အထိအထီးကနေ run နေနဲ့ပေါင်းစပ်ဤရွေ့ကားကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံသည်, အမျိုးသမီး mounting ထံမှအထီးတားဆီး  ။ ဒါဟာ [အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးတစ်ဦး intromission လက်ခံရရှိလျှင်ထက် intromission မရှိဘဲတောင်ပေါ်မှာအောက်ပါနောက်တဖန်ရှိရာသို့အလျင်အမြန် mount မှအထီးခွင့်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်20,50] ။ အမျိုးသမီးကြွက်များအားဖြင့်အထီးရဲ့ copulatory အပြုအမူ၏ဤစည်းမျဉ်း [ 'PACE' 'ချေါနှင့် progestation နှင့်ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်နေသည်20,21]. အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ပွေးညီမိတ်လိုက်အပြုအမူနျူကလိယ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်တွေးဆနေပါတယ် dopamine accumbens [4,28,29,32,33,58,84] ။ မျက်နှာပြင်တွင်, အမျိုးသမီးကြွက်များအားဖြင့်အရှိန်အဟုန်၏ရှုပ်ထွေးသောပုံစံအတှေ့အကွုံအားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောနိုင်မယ့်အမူအကျင့်အကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါကန့်သတ်မရရှိနိုင်ပါဒေတာ, သို့သော်, [မဟုတ်ရင်အကြံပြု19] နှင့်ရေပန်းစားနေသောနိဂုံးချုပ်  သည်“ …အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်မွေးရာပါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်” (စ။ ၄၈၂) ဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့တိုက်ပိတ်ဖြစ်တည်မှုပေးသောအမျိုးသမီးဟမ်းစတား [ဥပမာ 46] ထက်သဘာဝလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကနေ, ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာခဲ့သရာများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမိတ်လိုက်ပုံစံရှိသည်။ အမျိုးသမီး (အဖြစ်အထီး) ဟမ်းစတား [သည့် Burrow သည့်စနစ်သို့ဦးဆောင်အဓိကဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း occlusions ထည့်သွင်း26] ။ တစ်ဦးကအမျိုးသမီးဟမ်းစတားတက်ကြွစွာ [ကြောင်း occlusive ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သူမ၏အပြုအမူ estrus စတင်ခြင်း၏မျှော်လင့်အတွက် Burrow ဝင်ပေါက်မှဦးဆောင်မယ့်အင်္ဂါဇာတ်ရနံ့လမ်းကြောင်းချတင်သောအားဖြင့် Burrow မှအထီးစုဆောင်းလေ့ကျင့်46] ။ ဒါဟာအိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရေးအထီးအဘို့အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအားဖြင့်လည်းမရှိရှိမရှိဒါမှမဟုတ်ရိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပုံကိုဤကဲ့သို့သောအိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ရေးအမည်မသိနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတို့သည် Burrow အတွက်ဓာတ်များဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အမျိုးသမီးအဆိုပါ estrous ပြည်နယ်နှင့်မိတ်လိုက်အစပျိုးနေသည်ပန်းတိုင်လမ်းဆုံးကိုရောက်ခဲ့မှီ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို [အတူတကွနေထိုင်46] ။ ယောက်ျားအဖော်ရှာပြီးနောက်အမျိုးသမီးရဲ့ Burrow ကနေမောင်းထုတ်ခံရသည်ကို .
အမျိုးသမီးဟမ်းစတားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ဟန်အနေအထား၏ immobility အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကာလအတွင်းယောက်ျားနှင့်အတူလင်းလင်းရည်ညွှန်းတက်ကြွဖလှယ်မှုတွေနဲ့ခြားနားနေသည်။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားလျင်မြန်စွာ [တစ် 95 မိစမ်းသပ်မှု၏ 10% ၏အထက်သို့များအတွက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့်ကိုယ်ဟန်အနေအထား lordosis ပူးတွဲတစ်တင်းကျပ်ရပ်တည်ချက်ယူဆ15] ။ အမျိုးသမီးကဒီအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ယောက်ျားကိုသူ၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာပုံ intromission နှင့်အတူ mount နှင့် / သို့မဟုတ် mount ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ကနေရေးဆွဲအဆိုပါထင်ရသောသိသာနိဂုံးချုပ်အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်မတူဘဲယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က PACE မဖြစ်ခဲ့သည်။
immobility ၏အသွင်အပြင်နေသော်လည်းအမျိုးသမီးဟမ်းစတား [တကယ်တော့ယောက်ျားနှင့်အတူမိတ်လိုက် interaction ကအတွက်အတော်လေးတက်ကြွပါဝင်သူများမှာ46] ။ မြင့်မြတ်သော  ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအမျိုးသမီးတို့သည်ဆွ၏ညှနျကွားအတွက်သူမ၏ပျဉ်ရွေ့လျားအတူအထီးဟမ်းစတားကနေထိတွေ့နိုင်သောဆွ perivaginal တုံ့ပြန်တက်ကြွ perineal လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီး [အထီးများက intravaginal သွင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်အထီးရဲ့အတွန်း၏အဆက်အသွယ်၏အချက်၏ညှနျကွားအတွက်သူမ၏လိင်အင်္ဂါလှုံ့ဆျော62] ။ တကယ်တော့အမျိုးသမီးဟမ်းစတားရဲ့ပျဉ်တစ်လိမ်းထုံဆေး၏လျှောက်လွှာသိသိသာသာ [penile သွင်းအောင်မြင်ရန်ယောက်ျားဟမ်းစတားရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်63].
အတူတူယူ, အမျိုးသမီးကြွက်နှင့်ကြွက်သူတို့သုတ်ရည်ထိထိန်းညှိရန်ကြည့်ရှုရသောလမျး၌ကွာခြား။ အမျိုးသမီးကြွက်နှင့်ကြွက်အကြားကွာခြားချက်ဟာအထီးများက mounting ထိန်းညှိဖို့ဒီတိရစ္ဆာန်များ၏စွမ်းရည်ကိုတည်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးကြွက်အထီးအမှန်တကယ် mount လိမ့်မယ်ရှိမရှိသို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအထီးများကတောင်ပေါ်၏ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်မရပေမယ့်အထီးအောင်မြင်စွာအထူးသဖြင့်အထိုင်ကြိုးပမ်းမှုအပေါ် intromit လိမ့်မယ်ဖြစ်စေမကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ကမိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် perineal လှုပ်ရှားမှုများကိုများကိုတွက်ချက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်သော်လည်းကဲ့သို့သော, ကြွက်များတွင် pacing အလွယ်တကူ, လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ကျနော်တို့အထီးများက intromission ထိန်းညှိအတွက်အမျိုးသမီးဟမ်းစတားရဲ့အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတာဖို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်ကိုယူ။ ကျနော်တို့ကအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအားလက်ခံတွေ့ဆုံတောင်ပေါ်၏နံပါတ်ယောက်ျားကဆုံးဖြတ်လျှင်ကြောင်းနှီးနှော, ဒါပေမယ့် intromission အတွက်အထှတျအထိတောင်ပေါ်အမျိုးသမီးရဲ့အပြုအမူအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားကြသည်, ထို့နောက် intromission ပါဝင်သည်ကိုတောင်ပေါ်၏ရာခိုင်နှုန်းကို (စာပေ၌ 'ထိမှန်မှုနှုန်း' 'ချေါ) အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည် အမျိုးသမီးရဲ့အပြုအမူအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှီခိုနေတဲ့တိုင်းတာမှု။
ဒီအဆိုပြုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ [ယခင်ကယောက်ျားနှင့်အတူ6အပတ်စဉ်, 10 မိနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကလက်ခံရရှိခဲ့ကွောငျးအမျိုးသမီးလိင်နုံခဲ့ဟမ်းစတားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးလေ့လာ8] ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်လိင်နုံအထီးဟမ်းစတားနှင့်အတူအသီးအသီးအမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဖက်ပါစေနှင့် copulatory အပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ လိင်အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲနုံယောက်ျားနုံအမျိုးသမီးနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးနုံယောက်ျား (လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားထိခိုက်နှုန်း (intromission နှင့်အတူတောင်ပေါ်ပိုမိုရာခိုင်နှုန်း) ရှိခဲ့သဖန်းသီး။ 1) ။ ထို့ပြင်ထိခိုက်မှုနှုန်း၌တူညီသောကွာခြားချက်အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်မှုသင်ယူနေတဲ့တည်ငြိမ်အကြံပြုခြင်း, သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက် 1 သို့မဟုတ်6ရက်သတ္တပတ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်ဟုတ်မဟုတ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးဟမ်းစတားသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီးဖြစ်ဖြစ် 1,3သို့မဟုတ်6ရက်သတ္တပတ်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ hit နှုန်း (intromission အတွက်အထှတျအထိတောင်ပေါ်၏အချိုးအစား) ...
တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှု [ယောက်ျားရဲ့ copulatory စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အမျိုးသမီးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သက်ရောက်မှုအတွက် dopamine ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ8] ။ အဆိုပါ dopamine neurotoxin, 6-hydroxydopamine, ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံလက်ခံရရှိမှအမျိုးသမီးဟမ်းစတား၏, ထိုနျူကလိယ accumbens အပါအဝင် Basal forebrain သို့ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုအမြိုးသမီးနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးနုံယောက်ျား (အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်လိုက်၏မြင့်မားသောထိခိုက်မှုနှုန်းဝိသေသမပြခဲ့ပါဘူးပုံ 2) ။ အတွေ့အကြုံအထီး-အမျိုးသမီးစွမ်းအပြုအမူပေါ်ဤအကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကပေါ် dopamine neurotoxin ၏သက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်စပ်ထိခိုက်မှုနှုန်းအတွက် increment မှတိကျတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးဟမ်းစတားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျက်သိမ်းသည့်နျူကလိယ၏ဒေသသို့ dopamine neurotoxin, 6-hydroxydopamine (6-OHDA) ၏ပြုတ်ရည်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ accumbens ...
3 ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုအမျိုးသမီးအတွက်အကြိုးအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်
ယောက်ျားနှင့်အတူထပ်ခါတစ်လဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကလည်းဆုလာဘ်၏ဆက်စပ်အတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်ရေရှည်အပြုအမူအကျိုးဆက်များထုတ်လုပ်ရန်။ အေးစက်သောအရပ် preference ကို  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးကွယ်ဖို့အသုံးဝင်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ ဒီပါရာဒိုင်းမှာတော့အထီးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က multi-အခန်းအခနျးတစျခုအခန်းနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ လိုက်ဖက်အခါသမယတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းတွင်တစ်ဦးတည်းထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ မတိုင်မီကဤအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအောက်ပါ, အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးသုတ်ရည်ထိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခန်းများတွင်သုံးစွဲအချိန်ဆွေမျိုးငွေပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန် (ကယောက်ျားကိုမရှိခြင်းမှာ) ယန္တရားစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။ ယောက်ျားနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိစစ်ဆင်ရေးအမျိုးသမီးအေးစက်မတိုင်မီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်မှုတွေအပြီးမိတ်လိုက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခန်းများတွင်သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်သုံးစွဲလျှင်အားဖြည့်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
အမျိုးသမီးကြွက် [ဥပမာ 65,69] နှင့်ဟမ်းစတားတွင်ဤလေ့လာမှုကြည်လင်သော (သော်လည်းဖြစ်ကောင်း unsurprising) ရလဒ်ကို  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအားဖြည့်နေကြကြောင်း။ ဒီအေးစက်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတှကျနှိုးဆွလိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်သိသာဘူး။ ကြွက်မဟုတ်သလိုဟမ်းစတားမကျင့်သည်အေးစက်သောအရပ် preference ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်မှလုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုများအဖော်ရှာစဉ်အတွင်း lordosis ၏ရိုးရှင်း display ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမျိုးသမီးကြွက် progestation နှင့်ကလေးမွေးဖွားရန်နှင့်ဆက်စပ်သော neuroendocrine အကျိုးဆက်များရှိကြောင်းအဆိုပါ mounting အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တစ်ဦးဦးစားပေးနှုန်းကိုရှိသည်။ အမျိုးသမီး PACE ပါဘူးရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအေးစက်ထုတ်လုပ်ကြဘူးအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကြားကာလမှာ PACE မှအမျိုးသမီးကြွက်ခွင့်ပြုတဲ့ conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူဘို့လိုအပ် [25,27,34,67,68] ။ အမျိုးသမီးရဲ့ဦးစားပေးကြားကာလမှာအထီးဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် pacing ထိန်းညှိလည်း [preference ကိုအေးစက်နေရာဆီသို့ဦးတည်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဒီမှာယာယီပုံစံ, PACE ၏သော်လည်းမရသေချာပေါက်ထိန်းချုပ်မှု, အရေးကြီးပါသည်34].
အမျိုးသမီးဟမ်းစတား [အဖော်ရှာများအတွက်ယာယီလိုအပ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး42] သူတို့သည်လည်းမိတ်လိုက်ရန်အခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေးပြသော်လည်း  ။ နေရာအရပ် preference ကိုအေးစက်များအတွက်အထီးများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်၏အရေးပါမှုကိုအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည့်အတွက်တဦးတည်းလမ်း [အထီးများက intravaginal intromission အမျိုးသမီးရဲ့လိင်အင်္ဂါ occluding နေဖြင့်တားဆီးခဲ့သည့်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနှင့်အတူပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction က၏ထိရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်တယ်39] ။ ဤတွင်, နေရာ preference ကိုအေးစက်မသက်ဆိုင်အမျိုးသမီးလိင်အပြုအမူအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းအင်္ဂါဇာတ်ဆွလက်ခံရရှိဖြစ်စေမ၏သိသာခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်စမ်းသပ်ဆဲရလဒ်ကို [အလားတူအင်္ဂါဇာတ် occlusive အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနေစဉ်အတွင်း accumbens dopamine အတွက်မြင့်ကာကွယ်ပေးသည်သောလေ့လာရေးချိုးဖောက်ပုံ40] ။ သို့သော်အမျိုးသမီးကြောင်း microdialysis လေ့လာမှုမှာလိင်နုံခဲ့ကြသည်။ နေရာတစ်နေရာ preference ကိုပါရာဒိုင်း၏အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းဥပမာအာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများ၏အလုံးအရင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေစဉ်အတွင်းနီးပါးရှိပါသည်ကြောင့်ပေါ်လာလိမ့်မယ် , [လိင်နုံအမျိုးသမီးအတွက်အင်္ဂါဇာတ်ဆွများ၏ကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှပံ့ပိုးသည့်အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှုခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေး40].
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကမှရာအရပျ preference ကိုအေးစက်ဖြန်ဖြေ neurotransmitter စနစ်များနည်းနည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှိခဲ့သည်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာတော့ naloxone နှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်ကုသခွငျးအားဖွငျ့ opioid neurotransmission antagonizing ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကမှရာအရပျ preference ကိုအေးစက်ဖျက်သိမ်း . ပြောင်းပြန် dopamine အဲဒီ receptor ရန်သုံးပြီးအများအပြားလေ့လာမှုများရောထွေးရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ပါပြီ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးဟမ်းစတား Pretreating  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကတစ် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူတားဆီး (သဖန်းသီး။ 3) ။ ကြွက်များတွင်အလားတူလေ့လာမှုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ထုတ်လုပ် .
တစ်ဦးသောအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) ယန္တရားထဲမှာမီးခိုးရောင်အခန်းနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိထပ်ခါတစ်လဲလဲဒဿနိကဗေဒသုတ်ရည်ထိမရှိခြင်းအတွက်အခန်းတွင်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်ရလဒ် ...
4 ။ အမျိုးသမီးလိင်အတွေ့အကြုံကိုအောက်ပါ Neurotransmitter နှင့်ဆယ်လူလာ plasticity
သူတို့ [ဥပမာ 60] လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏အစိတ်အပိုင်းများဆက်စပ်အဖြစ် dopamine အချက်ပြ၏ယန္တယားသို့သုတေသနတစ်ခုကြွယ်ဝသောအစဉ်အလာရှိပါတယ်။ စာပေထဲကနေချေး, ဥပမာ copulatory ထိရောက်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ပြောင်းလဲမှုများကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက် dopamine neurotransmission ထိခိုက်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေစူးစမ်းနှင့်စနစ်ကြောင့် plasticity လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များများအတွက်အခြေခံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း၌အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနေစဉ်အတွင်း activation အဘို့သက်သေသာဓကအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် neurochemical plasticity အပေါ်ရေရှည်သက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်။ ကနဦး microdialysis စမ်းသပ်ချက်အမျိုးသမီး၏နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်မိတ်လိုက်နေစဉ်အတွင်းခြီးမွှောကျခဲ့သရုပ်ပြ [55,58] ။ အမျိုးသမီးကြွက်အဘို့, dopamine လွှတ်ပေးရန် [ယောက်ျားနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက် interaction ကမှအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံခဲ့တယ်4,33,58] နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဟမ်းစတား (အနည်းဆုံးလိင်နုံ) အတွက်, dopamine မြင့်တက် [အဖော်ရှာစဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိအင်္ဂါဇာတ်ဆွအပေါ်မှီခို40] ။ ငါနောက်ဆက်တွဲကျနော်တို့လိင်နုံအမျိုးသမီးဟမ်းစတားတွင်သို့မဟုတ်မတိုင်မီ microdialysis စမ်းသပ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့ကြောင်းအမျိုးသမီးအတွက်အဖော်ရှာစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုင်းတာခြင်း, ဤအချိန်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းယူစမ်းသပ်မှု na . လိင်အတွေ့အကြုံကိုလိင်နုံအမျိုးသမီးအတွက် dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လျှောက်လုံးတည်မြဲမှုကြောင့် extracellular dopamine အတွက်ပုံကြီးချဲ့တိုးထုတ်လုပ် (ပုံ 4). ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိင်ကြုံတွေ့အမျိုးသမီးအတွက်တိုးမြှင့် dopamine တုံ့ပြန်မှုအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်အဖြစ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာရာမှဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအဖော်ရှာ၏သန့်စင်စစ်ခင်းကျင်းထင်ဟပ်။
လိင်တွေ့ကြုံ (Exper) သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအမျိုးသမီး (အဘယ်သူမျှမ Exper) ဟမ်းစတားနျူကလီးယပ် accumbens အတွက် microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျနှငျ့အမြိုးသမီး 1 နာရီများအတွက်အထီးနှင့်အတူထားရှိခဲ့ကြသည်။ နမူနာယူခဲ့ကြသည် ...
အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်မြင့် [အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှတိရစ္ဆာန်များ၏ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများဆင်တူဖြစ်ပါသည်75] ။ ဒီစာပေများတွင်မူးယစ်ဆေးတစ်ခုပုံသေထိုးတုံ့ပြန် dopamine ၏မြင့် level ကို [ "ာင်း" ဟုချေါဖြစ်ပါတယ်75] ။ မူးယစ်ဆေးာင်းအဆိုပါ mesolimbic လမ်းကြောင်းမှတဆင့် Synaptic ထိရောက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ထင်ဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ် .
Oအမူအကျင့်အတွေ့အကြုံကိုအာရုံခံ plasticity ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်မှတဆင့်ယန္တရားသို့ ne entry ကိုအမှတ် synapses များ၏အဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤမေးခွန်းကိုဖို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်ခြင်း (နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်) striatal အတွက် dendritic အပြောင်းအလဲများကိုမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အောက်ပါအပြုအမူအတွေ့အကြုံကိုတုံ့ပြန်အာရုံခံတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော pharmacological profile များကိုအတူနှိပ်စက်တ္ထုများအမျိုးမျိုး၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ terminal ကို dendritic အခက် dendritic အရှည်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးပွါးစေ [13,23,44,45,64,76,77,78]. ဝေးနည်းပါးလာဥပမာ [dendrites အပေါ်နှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်အပြုအမူအတွေ့အကြုံအတွက်ဆားအစာစားချင်စိတ်များသော်လည်း induction တည်ရှိ79] အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  ကနျူကလိယ accumbens ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံအတွက် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲပစ်ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်လိင်အတွေ့အကြုံကို [dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအပေါ်တစ်ဦး differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့59] (ဆန်းစစ်ဒေသတွင်းပေါ် မူတည်.သဖန်းသီး။ 5) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်အမျိုးသမီးဟမ်းစတားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ6ရက်သတ္တပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံပါရာဒိုင်းပေးထားသောသို့မဟုတ် [လိင်နုံကျန်ရစ်ခဲ့သည်38] ။ အဆိုပါ7တွင်th အပတ်ကအားလုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦး estradiol နှင့်အဓိကချို့ယွင်း Prime regimen ပေးထားသောနှင့်အဓိကချို့ယွင်းဆေးထိုးပြီးနောက်4နာရီအကြောင်းကိုယဇျပူဇျောခဲ့သညျ။ ဦးနှောက် Golgi အစွန်းအထင်းအဘို့အလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်နှင့်အ 240 μmချပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျောရိုးဟာ medial prefrontal cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ terminal ကို dendritic အကိုင်းအခက်, အနျူကလိယ accumbens ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံ (shell ကိုနှင့် core ကိုပေါင်းစပ်), ဒါမှမဟုတ် dorsal caudate ၏အလယ်အလတ် spiny အာရုံခံကနေရေတွက်ခဲ့သည်။ နျူကလီးယပ် accumbens များ၏အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွင်း, (dendritic အရှည်၏ 10 μmမှပုံမှန်) dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆလိင်နုံ, အမြိုးသမီးအတွက်ထက်လိင်ကြုံတွေ့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ စကားဝိုင်းကို prefrontal cortex ၏အလွှာ V ကိုအာရုံခံ၏ apical dendrites အတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ caudate အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆမအုပျစုကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ [dopaminergic-တုံ့ပြန်မှုအာရုံခံအပေါ် excitatory neurotransmission အတွက် plasticity ထင်ဟပ်အဖြစ်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအနက်ကိုဘော်ပြ37].
(10 μmနှုန်းပုံမှန်) ကျောရိုးထုနျူကလိယ accumbens, အ prefrontal cortex ကနေ (Golgi အစွန်းအထင်းများဥပမာညာဘက် panel ကိုအတွက်တင်ပြကြသည်) တွင် neuron များ၏ terminal ကို dendrites အတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် ...
ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခု distal ဆယ်လူလာအမှတ်အသားအဖြစ် dendritic ကျောရိုးထဲမှာ plasticity ယူလျှင်, ငါတို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကခြင်းဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းဆယ်လူလာဖြစ်ရပ်များ၏အဆငျ့ဆငျ့ကို hypothesize နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်အာရုံ [အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသမှုအားဖြင့်ရုပ်ပြတုံ့ပြန်မှုများ၏အတန်းနှစ်ခုအပေါ်ဖြစ်သင့်36], ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမရှိခြင်းအတွက်ပြောင်းလဲဆယ်လူလာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပုံကြီးချဲ့တုံ့ပွနျ။ အဆိုပြုထားအချက်ပြဖြစ်ရပ်များတွင်ဖော်ပြပါရှိသည် သဖန်းသီး။ 6။ dendritic plasticity Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားလှုံ့ဆော်မှုမှပေါ်ပေါက်အတိုင်းဤအဆိုပြုချက်ကို [, ဝတ္ထုမဟုတ်သလိုအစွန်းရောက်မဖြစ်ပါသည်54] အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ , ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်အလားအလာ  အားလုံးပုံဥပမာဖြစ်ရပ်များပါဝငျသညျ။ ဤအလမ်းကြောင်းဒါကောင်းစွာအာရုံကြော plasticity ၏မတူညီဥပမာအတွက်ကိုယ်စားပြုကြောင့်၎င်းသည်ကွာဟချက်တူညီတဲ့အတွက်ဖြည့်ကြသည်အတိုင်းနျူကလိယ accumbens အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသက်ရောက်မှု၏စစ်မှန်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိပုံဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ဆယ်လူလာ plasticity အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲများဖျန်ဖြေနိုင်ကြောင်းအချို့သောအချက်ပြလမ်းကြောင်း၏သိထားပုံ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ microarray ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း  သည်ဤအတွက်အများအပြား node များမှထောက်ပြ ...
မျိုးဗီဇ microarrays အသုံးချဖို့အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုချဉ်းကပ်မှု  စမ်းသပ်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကနေရရှိလာတဲ့သည်ဤလမ်းကြောင်းအတွက်အများအပြားအချက်များမှာပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ပရိုတိန်းစကားရပ်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှစတင်ပါပြီ။ ကူးယူမှတ်တမ်းတင်အချက်များ [ရေရှည် plasticity မှဦးဆောင် dendritic ဖွဲ့စည်းပုံမှာ impact နိုငျသောမော်လီကျူးဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခု set ကိုကိုယ်စားပြုသည်5,17,52] ။ က c-Fos နှင့် FosB အစွန်းအထင်းနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်မိတ်လိုက်ရန်တုန့်ပြန်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အထီးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနောက်တွင်က c-Fos အစွန်းအထင်းအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏အဓိက, လိင်-အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးအတွက်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့တုန့်ပြန် (အတွင်းသို့ခြီးမွှောကျခံခဲ့ရသဖန်းသီး။ 7)  ။ အစွန်းအထင်းများအဆင့်ဆင့်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိင်က-အတွေ့အကြုံရှိအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏အဓိကအဆင့်မြင့်ခဲ့ကြသည်သော်လည်း FosB အစွန်းအထင်း detectibly (တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 8) ။ ကိုမက c-Fos မဟုတ်သလို FosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်ဤအမျိုးသမီးအတွက်နျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကိုသို့မဟုတ် dorsal striatum ဖြစ်စေများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့သညျ။ သည်အခြားလေ့လာမှုများတွင်ဤပရိုတိန်းမြားတှငျပွောငျးလဲအမြဲ covar မကျင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ချက်များတွင်က c-Fos နှင့် FosB အတွက်အပြောင်းအလဲနှစ်ဦးစလုံးဒေသတွင်းနှင့်အတွေ့အကြုံများတဲ့ function ကိုအဖြစ်အပြိုင်ပေါ်ပေါက်y က [ဥပမာ 12] ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်း (စမ်းသပ်) သိသိသာသာ (ဂ-Fos အစွန်းအထင်းကိုတိုးပွားစေap <0.05 vs. အဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်မှု) အမျိုးသမီးဟမ်းစရစ်၏နျူကလိယ accumbens ၏အဆင့်၌, လိင်အတွေ့အကြုံအတွက်ချီးမြှင့်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု ...
အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအပတ်စဉ်6ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပါရာဒိုင်းလက်ခံရရှိ, 10 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစမ်းသပ်မှု MIN သို့မဟုတ်ဟော်မုန်းရစေတယ်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်စမ်းသပ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ7တွင်th ဝက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါအပတ်ကဤအုပ်စုများခွဲခြားခဲ့သည် ...
Fos ပရိုတိန်းသည့် MAP kinase အပါအဝင်အများအပြားအချက်ပြလမ်းကြောင်း [မှတဆင့် activated နိုင်ပါသည်18] ။ (ERK ဒီလမ်းကြောင်းအတွက်မြစ်အောက်ပိုင်း kinase ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါ ERK ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုလေ့လာသဖန်းသီး။ 9) ။ အနောက်တိုင်းချေများတွင်စုစုပေါင်း ERK2အဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကတစ်ခုခုကိုကြောင့်ထိခိုက်မခံခဲ့ရပါ။ ဆနျ့ကငျြ, အခွင့်အရေး2လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါနျူကလိယ accumbens အတွက်ခြီးမွှောကျပေမယ့်မှသာကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက်ခံခဲ့ရသည်။
ERK1 /2၏အဆင့်ဆင့်အမျိုးသမီးဟမ်းစတား၏နျူကလိယ accumbens နှင့် caudate နျူကလိယ၏လာကြတယ်ထံမှအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ နျူကလီးယပ် accumbens ထံမှတစ်သျှူးလာကြတယ် (2 မီလီမီတာအချင်း) (core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံး) ...
အဆိုပါမြေပုံ kinase လမ်းကြောင်းသို့ entry [အချိုမှု receptor activation အပါအဝင်အများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ထံမှလာနိုငျ1] G-ပရိုတိန်း coupled receptors (ဥပမာ, dopamine receptors)  inositol triphosphate လမ်းကြောင်း  နှင့် growth factor receptors မှတဆင့်  ။ ဤအလမ်းကြောင်းအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုသက်ရောက်မှု microarray ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှတဆင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ , ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုတိုက်ရိုက်လေ့လာကြပြီမဟုတ်။ တကယ်တော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းတစ်ခုမှာယန္တရား [adenylate cyclase မှ dopamine အဲဒီ receptor နားချင်းဆက်မှီဖြစ်ပါသည်10] ။ နျူကလီးယပ် accumbens ကနေတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းလိင်အတွေ့အကြုံရှိသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအမျိုးသမီးဟမ်းစတားကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ (ဤတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း dopamine နှင့်အတူနှိုးဆွပေးခဲ့ကြသည်များနှင့်စခန်းစုဆောင်းခြင်းတိုင်းတာသဖန်းသီး။ 10) ။ Dopamine ဟာလိင်ကြုံတွေ့အမျိုးသမီးထံမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဆွအတူအားလုံးကုသမှုအုပ်စုများအတွက်စခန်းစုဆောင်းခြင်းနှိုးဆွ။ T ကdopamine ၏ hese လုပ်ရပ်များကမကထပြုခဲ့ D1 အဲဒီ receptor ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအောက်ပါ plasticity များထဲမှအစိတ်အပိုင်း (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကနေစဉ်အတွင်း dopamine efflux တိုးမြှင့) presynaptic သော်လည်း, ကရိုးရှင်းစွာတိုးမြှင့် Synaptic dopamine အဆင့်ဆင့်၏ထင်ဟပ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို postsynaptic ပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်နည်းတူရှင်းပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံသို့မဟုတ်လုံးဝမအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်စေလက်ခံရရှိအမျိုးသမီးဟမ်းစတား၏နျူကလိယ accumbens ကနေတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း dopamine ဆွအောက်ပါစခန်းစုဆောင်းခြင်းများအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် (Data မ dopamine% ရှိပါတယ် ...
5 ။ အကျဉ်းချုပ်နှင့်နိဂုံးပိုင်း
mesolimbic dopamine function ကိုတစျခုမှာအယူအဆကဒီလမ်းကြောင်းရှိသူများအပြုအမူတွေ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမယ့်လမ်းအတွက်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်အပြုအမူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အေးစက်ဂုဏ်သတ္တိများမှအထိခိုက်မခံကြောင်းဖြစ်ပါသည် . ဒီမူဘောင် မှစ. ငါတို့သည်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းအမျိုးသမီးများကလက်ခံရရှိသောအင်္ဂါဇာတ်ဆွ dopamine neurotransmission လှုံ့ဆော်သောအပြုအမူတစ်ခုပုံစံ၏ပဋိသန္ဓေ ယူ. နိုင်ပါတယ်။ ကနဦးကဤတုံ့ပြန်မှု [ခြွင်းချက်မရှိသော်လည်း55] အတွေ့အကြုံကိုအမျိုးသမီးအဆိုပါ mounting အထီးကနေအင်္ဂါဇာတ်ဆွလက်ခံရရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေသည်ဟုသိမ်မွေ့ perineal လှုပ်ရှားမှုများကိုထုတ်လုပ်ရန်သင်ယူနှင့်အတူ . အလှည့်မှာတော့တုံ့ပြန်သည့်အမူအကျင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရှေ့ဆက် feeds ရာထက် သာ. ကြီးမြတ်သော dopamine activation ရှိ၏။ [အ mounting အထီးကနေ intromissions မှတဆင့်အင်္ဂါဇာတ်ဆွလက်ခံရရှိခြင်း (အထီးများကသုတ်ရည်လွှတ်ရှေ့) ကို progestational ပြည်နယ်ပူးတှဲပါ fertilization (ထို့ကြောင့်အောင်မြင်သောကိုယ်ဝန်) ၏သော induction များအတွက်လိုအပ်သောကြောင့်42], ဒီအမူအကျင့်စည်းမျဉ်းမျိုးပွားမှုအောင်မြင်မှုဦးဆောင် copulatory ထိရောက်မှုတိုးပွားလာ၏သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်။ "ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးမိတ်သလဲ?" ၏မေးခွန်းကိုအဖြေ forebrain dopamine လှုပ်ရှားမှု၏ပုံစံအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအကျိုးဆက်များရှိကြောင်းဆွခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤ '' ပျြောမှေ့စ '' အစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်မြင်သောကိုယ်ဝန်နှင့်သားစဉ်မြေးဆက်၏မွေးအလွန်အမင်းသပ္ပါယ်, အကျိုးဆက်များသော်လည်း, (view ၏အမျိုးသမီးရဲ့အချက်အနေဖြင့်) ကိုမျှော်လင့်ရှိသည်။
ကျနော်တို့အရေးကြီးဒေါက်တာကက်သရင်း Bradley, Alma Haas, မာဂရက်ယုပ္ပေဒေါက်တာ Jesse Kohlert, ရစ်ချတ်ရိုဝီကဒေါက်တာ Val Watts အပါအဝင်ဤသုတေသနမှလှူဒါန်းခဲ့ကြသူလူများနံပါတ်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ မိမိအကွံဉာဏျနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏အမှုအမျိုးမျိုး၌စဉ်ဆက်မပြတ်အကျိုးစီးပွားများအတွက်ပေါလုကို Mermelstein မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို Breckenridge, Co. , ကျနော်တို့ကသူတို့အဘို့အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း (အိဗ်-2006 နှင့်အိဗ်-9412543) နှင့်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute (DA9723876) ကိုကျေးဇူးတင်နေကြသည်, steroids ဟော်မုန်းများနှင့်ဦးနှောက်ရာထူးအမည်ပေါ်တွင် 13680 အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာပေးထားဟောပြောချက်အပေါ်အခြေခံသည် ဒီသုတေသန၏ထောက်ခံမှု။
1 ။ အဒမ် JP, Roberson ED, အင်္ဂလိပ် JD, Selcher JC, Sweatt JD ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်မျိုးဗီဇထုတ်ဖော် MAPK စည်းမျဉ်း။ Acta Neurobiol Exp (စစ်ပွဲများ) 2000; 60: 377-394 ။ [PubMed]
၂ ။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2; 1999: 105-129 ။ [PubMed]
3 ။ ဘားလုပ် SA ။ အဆိုပါ Rat: အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးကလေ့လာမှု။ Aldine; ချီကာဂို: 1963 ။
5 ။ Bibb ဂျေအေ။ အာရုံခံအချက်ပြ, ပလတ်စတစ်, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် Cdk5 ၏အခန်းက္ပ။ Neuro-SIGNAL ။ 2003; 12: 191-199 ။ [PubMed]
6 ။ Blaustein JD, Erskine က MS ။ ဣတ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အကြွက် forebrain အတွက်ဟော်မုန်းနှင့် afferent အချက်အလက်များ၏ဆယ်လူလာပေါင်းစည်းမှု။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff DW, အာနိုးက AP, Etgen လေး, Fahrbach SE, Rubin က RT ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့် Hormones ။ vol ။ 1 ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; အမ်စတာဒမ်: 2002 ။ စစ။ 139-214 ။
7 ။ Bradley KC, Boulware ကို MB, Jiang H ကို, Doerge RW, Meisel RL, Mermelstein PG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနျူကလိယ accumbens နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ dorsal striatum အတွင်းဗီဇစကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2005; 4: 31-44 ။ [PubMed]
8 ။ Bradley KC, Haas AR, Meisel RL ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် 6-Hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (Mesocricetus auratus) အမျိုးသားများနှင့်အတူ copulatory interaction ကအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမြား၏ sensitized သက်ရောက်မှုများကိုဖျက်ပယ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2005; 119: 224-232 ။ [PubMed]
9 ။ Bradley KC, Meisel RL ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းက c-Fos ၏လိင်အမူအကျင့်သော induction အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအားဖြင့် sensitized နေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 2123-2130 ။ [PubMed]
10 ။ Bradley KC, Mullins AJ, Meisel RL, Watts VJ ။ လိင်အတွေ့အကြုံကို: D dopamine ပွောငျးလဲ1 အဲဒီ receptor အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏နျူကလိယ accumbens အတွက်သိသိ amp ထုတ်လုပ်မှုကမကထပြုခဲ့။ synapses ။ 2004; 53: 20-27 ။ [PubMed]
11 ။ Bramham CR, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Synaptic plasticity အတွက် Messaoudi အီး BDNF function ကို: အဆိုပါ Synaptic စုစည်းပြီးယူဆချက်။ prog Neurobiol ။ 2005; 76: 99-125 ။ [PubMed]
12 ။ Brenhouse HC, ကြယ် JR ။ က c-Fos နှင့်ΔFosBစကားရပ် differential သည့်နျူကလိယ၏ကွဲပြားငျဒသေထဲမှာပြောင်းလဲနေကြသည်ကိုကင်း-sensitized ကြွက်များတွင် shell ကို accumbens ။ neuroscience ။ 2006; 137: 773-780 ။ [PubMed]
13 ။ ဘရောင်း RW, Kolb ခနီကိုတင်းာင်းနျူကလီးယပ် accumbens နှင့် cingulate cortex အတွက် dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 899: 94-100 ။ [PubMed]
14 ။ Carr က GD, Fibiger HC, Phillips က AG က။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Leibman JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဆုကြေး၏ Neuropharmacological အခြေခံ။ Clarendon Press က; အောက်စဖို့ဒ: 1989 ။ စစ။ 264-319 ။
15 ။ Carter က CS ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက် Postcopulatory လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception: အ Ovary ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှင့် adrenal ။ Horm ပြုမူနေ။ 1972; 3: 261-265 ။ [PubMed]
16 ။ Chao သင်္ဘော MV ။ Neurotrophins နှင့်၎င်းတို့၏ receptors: အများအပြားအချက်ပြလမ်းကြောင်းများအတွက်တစ်ဦးကဆုံပွိုင့်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2003; 4: 299-309 ။ [PubMed]
17 ။ ချောင် ZH, ဖူ AKY, IP နယူးယော့။ Cdk5 ၏ Synaptic အခန်းကဏ္ဍ; ပိုမိုမြင့်မားသိမြင် function ကိုနှင့် neurodegenerative ရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 50: 13-18 ။ [PubMed]
18 ။ Davis က RJ ။ MAP kinases အားဖြင့်မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်း။ Mol Reprod Dev မှ။ 1995; 42: 459-467 ။ [PubMed]
19 ။ Erskine က MS ။ နဂိုအတိုင်းစက်ဘီးစီးကြွက်များနှင့် ovariectomized နှင့် ovariectomized-adrenalectomized ဟော်မုန်း-ရစေတယ်ကြွက်များတွင် estrus ကြာချိန်ပေါ် PACE coital ဆွ၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1985; 99: 151-161 ။ [PubMed]
20 ။ Erskine က MS ။ တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: အ estrous အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်တောင်းနိုင်အောင်အပြုအမူ။ Horm ပြုမူနေ။ 1989; 23: 473-502 ။ [PubMed]
21 ။ Erskine က MS, Kornberg အီး, ချယ်ရီဂျေအေ။ ကြွက်များတွင်ပွေးညီသုတ်ရည်ထိ: luteal activation နှင့် estrus အရှည်ပေါ် intromission ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကြာချိန်သက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1989; 45: 33-39 ။ [PubMed]
22 ။ ဖက်ဒရယ်နာရီ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် Estrous သိသိ။ ခုနှစ်တွင်: Adler NT, အယ်ဒီတာ။ မျိုးပွား၏ Neuroendocrinology ။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: စစ 279-348 ။ ။
23 ။ Ferrario CR, Gorny, G, Crombag HS လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အာရုံကြောနှင့်ထိန်းချုပ်ကနေဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအကူးအပြောင်းနဲ့ဆက်စပ်အပြုအမူ plasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 751-759 ။ [PubMed]
24 ။ Fiorino DF, Kolb BS ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ Society က။ New Orleans, LA က, 2003 Abstract Viewer ကိုများနှင့်ခရီးစဉ်အစီအစဉျ; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2003 ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုအထီးကြွက် prefrontal cortex အတွက်ကြာရှည် morphological အပြောင်းအလဲ parietal cortex မှဦးဆောင်နှင့်နျူကလိယတွင် neuron accumbens ။
25 ။ Gans က S, Erskine က MS ။ အပြုအမူနှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် pacing အပေါ်မွေးကင်းစကလေးများ testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုဆိုးကျိုးများ။ Horm ပြုမူနေ။ 2003; 44: 354-364 ။ [PubMed]
26 ။ Gattermann R ကို, Fritzsche P ကို, နျူမန် K ကို Kayser တစ်ဦးက, Abiad M က, Yaku R. မှတ်စုများလက်ရှိဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ရိုင်းရွှေဟမ်းစတား (များ၏ဂေဟဗေဒပေါ်Mesocricetus auratus) J ကို Zool Lond ။ 2001; 254: 359-365 ။
27 ။ ဇာလ-Florez အို Camacho FJ, Dominguez-Salazar အီး, Ramirez-Orduna JM, Beyer ကို C, သိပ်မရှိပါဘူး RG ။ PACE မိတ်လိုက်ပြီးနောက် Progestins နှင့်နေရာ preference ကိုအေးစက်။ Horm ပြုမူနေ။ 2004; 46: 151-157 ။ [PubMed]
28 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Megroz AB, Clark က AS ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ်နျူကလိယ accumbens ၏ ibotenic အက်ဆစ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2002; 116: 568-576 ။ [PubMed]
29 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Megroz AB, Clark က AS ။ vaginocervical ဆွဖို့တုံ့ပြန်မှုသုံးဒေသများတွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်အပြုအမူပွေးညီ။ ဦးနှောက် Res ။ 2004; 999: 40-52 ။ [PubMed]
30 ။ Horsman PG, သိပ်မရှိပါဘူး RG ။ Dopamine ရန်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်အပြုအမူအားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပိတျဆို့ကြပါဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2004; 118: 356-364 ။ [PubMed]
31 ။ Hyman SE, Malenka RC ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အဆိုပါမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001; 2: 695-703 ။ [PubMed]
32 ။ Jenkins WJ, Becker က JB ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန် copulatory အပြုအမူအတွက် striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2001; 121: 119-128 ။ [PubMed]
33 ။ Jenkins WJ, Becker က JB ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း dopamine အတွက် dynamic တိုး။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 1997-2001 ။ [PubMed]
34 ။ Jenkins WJ, Becker က JB ။ အမျိုးသမီးကြွက်သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးကြားကာလမှာလိင်အဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကိုဖွံ့ဖြိုး။ Horm ပြုမူနေ။ 2003; 43: 503-507 ။ [PubMed]
35 ။ ဂျီ Y ကို, Pang PT, Feng တို့က L, Lu ကခသိသိ amp BDNF-သွေးဆောင် TrkB phosphorylation နှင့်ရင့်ကျက် hippocampal အာရုံခံအတွက် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းရေးထိန်းချုပ်သည်။ နတ် Neruosci ။ 2005; 8: 164-172 ။ [PubMed]
36 ။ Kalivas PW, Toda က S, Bower က MS, Baker DA, Ghasemzadeh ကို MB ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများများ၏ယာယီ sequence ကို။ ခုနှစ်တွင်: ဝမ် JQ, အယ်ဒီတာ။ မော်လီကျူးဆေးပညာအတွက်နည်းလမ်းများ: အလွဲသုံးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး: အာရုံကြောပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့် Protocol များ။ vol ။ 79 ။ Humana စာနယ်ဇင်း; Totowa, NJ: 2003 ။ စစ။ 3-11 ။
37 ။ Kalivas PW, Volkow N ကို, စွဲလမ်းအတွက် Seaman ဂျေစီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်တစ်ဦးကရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 647-650 ။ [PubMed]
38 ။ Kohlert JG, Meisel RL ။ လိင်အတွေ့အကြုံကိုမိတ်လိုက်-related နျူကလိယအမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား၏ dopamine တုံ့ပြန်မှု accumbens sensitizes ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999; 99: 45-52 ။ [PubMed]
39 ။ Kohlert JG, Olexa N. အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏ဝယ်ယူဘို့အင်္ဂါဇာတ်ဆွများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 84: 135-139 ။ [PubMed]
40 ။ Kohlert JG, ရိုဝီက RK, Meisel RL ။ ယောက်ျားထံမှ Intromissive ဆွအမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏ midbrain အတွင်း fluoro-ရွှေဖော်ထုတ်အာရုံခံထံမှ extracellular dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 1997; 32: 143-154 ။ [PubMed]
41 ။ Kumar က V ကို, Zhang က MX, Swank မဂ္ဂါဝပ်, Kunz J ကို, Wu GY ။ Ras-PI3K-Akt-mTOR နှင့် Ras-MAPK အချက်ပြလမ်းကြောင်းအားဖြင့် dendritic morphogenesis ၏စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 11288-11299 ။ [PubMed]
42 ။ Lanier DL, Estep DQ, Dewsbury DA ။ ကိုယ်ဝန်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: ရွှေကြွက်၏ Copulatory အပြုအမူ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1975; 15: 209-212 ။ [PubMed]
43 ။ Lee က KW ကင်မ် Y ကိုကင်မ်လေး, Helmin K ကို Nairn AC အ, နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103: 3399-3404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ လီ Y ကို, Acerbo MJ, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နျူကလီးယပ် accumbens ၏ (သို့သော် shell မဟုတ်) အဓိကထဲမှာကိုကင်း-သွေးဆောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 20: 1647-1654 ။ [PubMed]
45 ။ လီ Y ကို, Kolb B, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆအတွက်မြဲစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏တည်နေရာနှင့်-putamen caudate ။ Neuropsychopharmacol ။ 2003; 28: 1082-1085 ။ [PubMed]
46 ။ Lisk RD, Ciaccio LA က, seminatural အခြေအနေများအောက်တွင်ရွှေကြွက်၏ Catanzaro C. အိမ်ထောင်ဖက်အပြုအမူ။ Animation ပြုမူနေ။ 1983; 31: 659-666 ။
47 ။ Lonze, Ginty DD BE ။ function နှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်း CREB မိသားစုကူးယူအချက်များ၏စည်းမျဉ်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 35: 605-623 ။ [PubMed]
48 ။ Marinissen MJ, Gutkind JS ။ G-ပရိုတိန်း-coupled receptors နှင့်အချက်ပြကွန်ရက်များ: ထွန်းသစ်စ Paradigm ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2001; 22: 368-376 ။ [PubMed]
49 ။ McClintock MK, Adler NT ။ ရိုင်းနှင့်ပြည်တွင်းနော်ဝေကြွက်များတွင်သုတ်ရည်ထိစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍ (Rattus norvegicus) အပြုအမူ။ 1978; 67: 67-96 ။
50 ။ McClintock MK, Anisko JJ ။ နော်ဝေကြွက်သုတ်ရည်ထိ၏ပုံစံနှင့် neuroendocrine အကျိုးဆက်များအတွက်ဗြဲလိင်ကွဲပြားမှုအကြား Group မှမိတ်လိုက်။ Animation ပြုမူနေ။ 1982; 30: 398-409 ။
51 ။ McClintock MK, Anisko JJ, Adler NT ။ နော်ဝေကြွက် II ကိုအကြား Group မှမိတ်လိုက်။ သုတ်ရည်ထိလူမှုဒိုင်းနမစ်: ယှဉ်ပြိုင်မှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုကို။ Animation ပြုမူနေ။ 1982; 30: 410-425 ။
52 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့်ΔFosBအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 1208-1215 ။ [PubMed]
53 ။ McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ ΔFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004; 132: 146-154 ။ [PubMed]
54 ။ McEwen BS ။ ဦးနှောက်အပေါ်အီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှု: မျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ J ကို Apple က Physiol ။ 2001; 91: 2785-2801 ။ [PubMed]
55 ။ Meisel RL, စခန်း DM, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း ventral striatal dopamine တစ် microdialysis လေ့လာမှု။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1993; 55: 151-157 ။ [PubMed]
56 ။ Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA ။ ပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအောက်ပါအမျိုးသမီးဟမ်းစတားအခြေအနေများအရပျကိုဦးစားပေး။ Physiol ပြုမူနေ။ 1994; 56: 1115-1118 ။ [PubMed]
57 ။ Meisel RL, ယုပ္ပေနေ MA, ရိုဝီက RK ။ Dopamine အဲဒီ receptor ရန်အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအောက်ပါ conditional ရာအရပျ preference ကို attenuate ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1996; 309: 21-24 ။ [PubMed]
58 ။ Mermelstein PG, Becker က JB ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် PACE copulatory အပြုအမူစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးကြွက်၏ striatum အတွက် extracellular dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995; 109: 354-365 ။ [PubMed]
59 ။ Mullins AJ, Sengelaub DR, Meisel RL ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့အ Society က။ San Diego မှ: 2004 Abstract Viewer ကိုနှင့် ItineraryPlanner; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2004 ။ MAP kinase အချက်ပြခြင်းနှင့် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အပေါ်အမျိုးသမီးဟမ်းစတားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏ဆိုးကျိုးများ။
60 ။ Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001; 2: 119-128 ။ [PubMed]
61 ။ Nestler EJ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacol ။ 2004; 47: 24-32 ။ [PubMed]
62 ။ Noble RG ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု: တစ်ဖော်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1979; 23: 1001-1005 ။ [PubMed]
63 ။ Noble RG ။ အမျိုးသမီးဟမ်းစတားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု: အထီးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 1980; 24: 237-242 ။ [PubMed]
64 ။ Norrholm SD, Bibb ဂျာ Nestler EJ, Ouimet CC ကို, တေလာ JR, နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုး၏ Greengard P. ကင်း-သွေးဆောင်ပြန့်ပွား cyclin-မှီခို kinase-5 ၏လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ neuroscience ။ 2003; 116: 19-22 ။ [PubMed]
65 ။ Oldenberger WP, Everitt BJ, de Jong FH ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အားဖြင့်သွေးဆောင်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26: 214-228 ။ [PubMed]
66 ။ Opazo P ကို, Watabe လေး, Grant က SGN, Odell တီဂျေ။ Phosphatidylinositol 3-kinase extracellular signal ကို-related kinase-လွတ်လပ်သောယန္တရားများမှတဆင့်ရေရှည်အလားအလာများ induction ထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 3679-3688 ။ [PubMed]
67 ။ အမျိုးသမီးများကသိပ်မရှိပါဘူး RG, စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် Alonso အေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ပွေးညီ) conditional ရာအရပျ preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1997; 111: 123-128 ။ [PubMed]
68 ။ သိပ်မရှိပါဘူး RG, မာတီနက်စ်၏ဗြဲ Naloxone လုပ်ကွက်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်ပြီးနောက် preference ကိုအေးစက်ထားပါ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2001; 115: 1363-1367 ။ [PubMed]
69 ။ အကြောင်းကိုလိင်နဲ့တူအမျိုးသမီးကြွက်ပြုပါဘယ်အရာကိုသိပ်မရှိပါဘူး RG, Vazquez ခ? ပြုမူနေဦးနှောက် Res အဖော်ရှာ PACE ။ 1999; 105: 117-127 ။ [PubMed]
70 ။ Pfaff DW ။ အီစရိုဂျင်နှင့်ဦးနှောက် function ကို။ Springer-Verlag; နယူးယောက်: 1980 ။
71 ။ Pfaff: D, Ogawa S က, Kia K ကို Vasudevan N ကို, Krebs ကို C, Frolich J ကို, Kow LM ။ အမျိုးသမီးမျိုးပွားအပြုအမူတွေကိုကျော်အာရုံကြောနှင့်ဟော်မုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်မျိုးဗီဇယန္တရားများ။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff DW, အာနိုးက AP, Etgen လေး, Fahrbach SE, Rubin က RT ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့် Hormones ။ vol ။3။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; အမ်စတာဒမ်: 2002 ။ စစ။ 441-509 ။
72 ။ MM Poo ။ Synaptic module ကို Neurotrophins ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001; 2: 24-32 ။ [PubMed]
73 ။ Radwanska K ကို Valjent အီး, Trzaskos J ကို, Caboche J ကို, ကိုကင်း-သွေးဆောင် Active ပရိုတိန်း 1 tanscription အချက်များ၏ Kaczmarek အယ်လ်စည်းမျဉ်းဥပဒေဟာ extracellular-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် kinase လမ်းကြောင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Neruoscience ။ 2006; 137: 253-264 ။ [PubMed]
74 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (ပျော့ပျောင်း 2): S91-117 ။ [PubMed]
75 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2003; 54: 25-53 ။ [PubMed]
76 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, Mitton အီး, Kolb ခကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် neocortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ synapses ။ 2001; 39: 257-266 ။ [PubMed]
77 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Gorny, G, ဗေ့ခ်ျ VR, Kolb ခနေရာအနှံ့ပေမယ် dendritic နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကျောရိုး, hippocampus နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ neocortex အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှိုင်းယှဉ် experimenter- ၏ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ synapses ။ 2002; 46: 271-279 ။ [PubMed]
78 ။ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 1598-1604 ။ [PubMed]
79 ။ Roitman MF, Na E ကို, အန်ဒါဆင်, G, ဂျုံးစ်က TA, Bernstein IL ။ ဆားအစာစားချင်စိတ်များ induction နျူကလိယ accumbens အတွက် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲနှင့်စိတ်ကြွဆေးမှကြွက်များ sensitizes ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: RC225 ။ (1-5) [PubMed]
80 ။ Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote သည် SM, Weber နဲ့ SM ။ အကျိုးကိုယူဆချက်ထက်ကျော်လွန်: နျူကလိယ၏အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens ။ Curr Opin Pharmacol ။ 2005; 5: 34-41 ။ [PubMed]
81 ။ ဘဏ္ဍာစိုးက, အို Worley PF ။ dendrites အပေါ် Synaptic က်ဘ်ဆိုက်များမှအသစ်ဖန်တီး mRNAs ပစ်မှတ်ထားများအတွက်တစ်ဦးကဆယ်လူလာယန္တရား။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2001; 98: 7062-7068 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
82 ။ Sweatt JD ။ အဆိုပါအာရုံခံသည့် MAP kinase အဆငျ့ဆငျ့: Synaptic plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ် subserving တစ်ဦးထဲကဓာတုပစ်စညျး signal ကိုပေါင်းစပ်စနစ်။ J ကို Neurochem ။ 2001; 76: 1-10 ။ [PubMed]
83 ။ Valjent အီး, Pascoli V ကို, Svenningsson P ကိုပေါလုသည်က S, Enslen H ကို, Corvol JC, Stipanovich တစ်ဦးက, Caboche J ကို, Lombroso PJ, Nairne AC အ, Greengard P ကို, Herve: D, Girault ဂျေအေ။ ပရိုတိန်း phosphatase အဆငျ့ဆငျ့၏စည်းမျဉ်း convergence dopamine နဲ့အချိုမှုအချက်ပြသည့် striatum အတွက် ERK activate လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ proc နတ် Acad သိပ္ပံ (USA) 2005; 102: 491-496 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
84 ။ Xiao L ကို, Becker က JB ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ဟော်မုန်း activation အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်အပြုအမူ modulates ။ Horm ပြုမူနေ။ 1997; 32: 114-124 ။ [PubMed]